စွဲလမ်းမိတဲ့ ဝေဒနာ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » စွဲလမ်းမိတဲ့ ဝေဒနာ	32
Posted byetone on Aug 3, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Short Story | 32 comments
” ဗျို့…..ကုလား …. နွားနို့ တစ်ပိသာလောက်” :P :P :P :P :P
Aboutetone
e tone has written 835 post in this blog.
View all posts byetone →	Blog
ပင်လယ် ပျော် says: ဟင်…feel တွေတတ်လာပြီးမှ ဘယ်လိ်ုဖြစ်ဒွါးရတာလဲ…ရင်ထဲအီစိမ့်စိမ့်ကြီးဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့တယ်…..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2358
ko khin kha says: မအိတုံလေး ပူတင်းလုပ်စားတဲ့နေ့ ဧည့်သည်အဖြစ်လာလည်လို့ရလားဟင်။
etone says: ပင်လယ်ပျော်ရေ …. ရဟတ်စီးရတဲ့ ဖီလင်မျိုးလေး …စာဖတ်သူကို ဖြစ်စေချင်လို့ပါ …. ။
http://mandalaygazette.com/49627/society-lifestyle/aha-jokes အပျိုကြီးရဲ့ အရွယ်လွန်အချစ်… ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးပါ …. ကိုခင်ခရေ …. အဟီး … ကျွေးတော့ကျွေးချင်ပါတယ် …. ။ ဒါပေမယ့် … မနက်ဆို …. ခြောက်နာရီခွဲ အိမ်ကထွက်ပြီး …ညဆို ဆယ်နာရီခွဲပတ်ဝန်းကျင်မှအိမ်ပြန်တတ်တာမို့ ….. ဧည့်သည်ဖိတ်ရင်တောင် .. အားနာနေ၇မယ့် အချိန်ဆိုတော့ … ဟီး …. ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး အီးမေးလ်ကကျွေးပါမယ်နော် …ဟိဟိ :P
pooch says: ရွာဝင်စက မှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေတဲ့ပိုစ့်လေးမို့ မှတ်မိတယ် ။ နောက်ရေခဲရေဘူးကို မရမကဖွင့်ရာကနေ အကိုနဲ့ အလွဲလေးဖြစ်သွားတဲ့ပိုစ့် နောက်တခုက စင်ဂဲမားသား အဲ့ဒီ ၃ ပုဒ်အကြိုက်ဆုံးပဲ ။
အတိသဌ္ဇနာဂရ says: မမအိတုံရေ သွယ်ဝိုက်ပြီး ဟဿရသမြောက်အရေးအဖွဲ့ အတွက် ပထမဆုံးလက်မလေးထောင်သွား
etone says: ကိုသန်းထွဋ်ဦးရေ … ရယ်စေချင်လို့ ပျော်စေချင်လို့ ရေးတာ … ရယ်ရတယ်ဆိုလို့ … ၀မ်းသာပါတယ်နော် … ။
မွန်မွန် says: အဲလာဆိုရင် ၀ယ်လိုက်မိတယ်ပေါ့…အဲဒီနေ့က… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9964
မောင်ပေ says: ညလေးအိတုန်ရေ အဆီတက်တာများကွယ်… ဒေါက်တာကိုကို တစ်ယောက်လုံးရှိနေတဲ့ဟာပဲဟာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4599
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အမလေး ဂျီးဒေါ်ရယ် …
လူဇိုး … :D
ကြောင်ဝတုတ် says: ပြတင်းပေါက်ကို ခြေဖျားထောက်ပြီး …. အားရ၀မ်းသာ အော်လိုက်မိပါတယ် …… ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 541
uncle gyi says:ှမအိတို့ဆီမှာခုထိကုလားနွားနို့်ပို့တုန်းလားမန်းလေးမှာရွာတွေကမိန်းကလေးတွေလိုက်ပို့နေတာ
YE YINT HLAING says: သူ့ရဲ့ ရုပ်ရည် နဲ့ အသက်က ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဓိကမကျပါဘူး ။ လောလောဆယ်တွယ်ငြိမိနေတာ သူ့အသံကြောင့်ပါ ။ ဆိုတော့ တော်တော် ကို စွဲလန်းနေပီ ပေါ့လေ တွေးလိုက်တာ ဟဲဟဲ- ပီးတော့ ဗျို့ကုလားတဲ့ ! ဟဲဟဲ- နောက်တာနော် !
ရဲစည် says: ရသပို့စ်ပါဗျို့ ဘရာကြော် ပါပလာကြော်ပါ
ကြောင်ကြီး says: မီ……ညောင်…
surmi says: ဟရေးးးးး ကန်းမလေးနော်
ရွာစားကျော် says: မထိတ်သာ မလန့်သာရှိလိုက်တာ ဒေါ်အိတုံရယ်…
ဦးဦးပါလေရာ says: တခုခုတော့ လှည့်ကွက်လေးလုပ်ပြီးရေးတော့မယ်လို့ မှန်းထားရဲ့သားနဲ့ကို
မထင်မှတ်တဲ့ဘက်က ဆွဲချသွားတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 923
mamanoyar says: မမအိတုန်နော် လူကိုလှည့်စားသွားတယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3094
Foreign Resident says: E Tone ရေ ။
we R one says: ဟင် …လူနောက်… တူများက တဂယ် မှတ်လို့.. မုအပြည့်နဲ ဖတ်နေတာ…
kyeemite says: ဒေါ်အီးတုံးက စာအရေးကောင်းတယ်ဗျာ…
R Ga says: လူနောက်ကြီး…. အပေါ်ပိုင်းလိုက် ဖတ်တုံးက ဖီလင်တွေတက်နေတာ.. ဗျုံးဆို…ပုတ်ချလိုက်တယ်။ ဟွန့်…..လူဆိုး..။
နွေဦး says: ကုလားလို့ မရေးနဲ့လေ…
Phaung Phaung says: ဇာတ်လမ်းအစကနေ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ တက်လာလိုက်တဲ့ဖီလင်က နောက်ဆုံးကျမှ နင်သွားတာပဲ…..
အရီးခင်လတ် says: စာဖတ်ပြီး နောက်ဆုံး ဘာဖြစ်မလဲလို့ တွေးရင်း အရသာ ရှိတာ ဖြစ်သွားတာကိုး။
weiwei says: ဖတ်နေရင်းနဲ့ ဈေးသည်တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် နွားနို့သည်လို့ မခန့်မှန်းလိုက်မိဘူး … :P
အလင်းဆက် says: အဟိ… အဟိ
Ko Khin Lwin says: နောက်နေ့ကော အသံလာရာကို နားစွင့်နေတုံးဘဲလား ကောင်းမလေး။
P chogyi says: မအိတုံရေ အကြံပေးတာပါ( အကျန်မဟုတ်ပါ)
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 705
marblecommet says: တစ်ပိသာကြီးများတောင်လား
snow white says: very very good အရမ်းကြိုက်တယ် စကတော့အချစ်ကြောင်းများဖွင့်ဟနေသလားမှတ်ရတယ်နောက်ကျတော့ရယ်နေရတယ် တကယ်ကောင်းတယ် ခုဖတ်နေတဲ့အချိန်ကတော်တော်လေးပျင်းနေတာ ခုဖတ်ပြီးရယ်လိုက်ရမှ ပဲအပျင်းပြေသွားတော့တယ် ကျေးဇူးပါမမအိရယ်။။
kotun winlatt says: အဟီးးးးးး မအိတုံ..တကယ်မှတ်ပီးးးဖတ်နေတာ..